ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य तोलाको कति ? – Online Nepal
March 18, 2020 5230
काठमाडौं – वुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । मंगलबार घटेको सुनको मूल्य आज तोलामा एक हजार रुपैयाँले बढेको हो । मंगलबार प्रतितोला ७५ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज तोलामा एक हजारले बढेर प्रतितोला ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने स्थीर रहेको छ । आज चाँदीको मूल्य तोलाको ७ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ ।
Prevभारतमै कोरना भाइरसको महामारी फैलिएपछि, नेपाल सरकारले चाल्यो बल्ल कडा कदम !
Nextअष्ट्रेलियामा को’रोना लागेका नेपाली युवक ७ दिनमै निको भएर अस्पतालबाट फर्किए !
काठमाडौँ उपत्यकामा आज अहिलेसम्मकै धेरै संख्यामा संक्रमित फेला